août 2018 - Page 2 sur 87 -
Antananarivo – renivohitra : Mirongatra ny vaky fiara
31/08/2018 admintriatra 0
Miha-mahazo vahana ny vaky fiara. Batery, ireo kodiarana ary ny “pare-brise” no betsaka indrindra sy tena alain’ireo mpangalatra noho izy ireny azo amidy lafo. Any amin’ireo faritra somary mafampana eto an-drenivohitra no tena betsaka ny …Tohiny
Minisiteran’ny Fitaterana : 13 Miliara Ar hozaraina amin’ireo mpitatitra
Manoloana ny fampihorohoroana ataon’ireo mpitatitra eo anivon’ny UCTU amin’ny fampakarana ny saran-dalan’ny taksibe ho 500 Ar manomboka ny 1 septambra izao, dia nandray fanapahan-kevitra hentitra ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fitaterana (MTM). Araka izany, nambaran’ny talen’ny …Tohiny
Fanondranana vehivavy any Chine : Olona dimy voasambotra
Tambajotra matanjaka. Efa an-taonany no nanaovana ny fikarohana ireo mpandefa vehivavy any Chine. Ela nitoratorahana ka nahavoa mason’angatra, izay no azo hilazana ireo olona ravan’ny polisim-pirenena avy eo anivon’ny enquête spécialisé Anosy, teny Ampasapito. Ny …Tohiny
Kaominina Ivato : Nojerena manokana ny beantitra
Afa-pahasahiranana ireo beantitra misotro ronono eny amin’ny Kaomina Ivato sy ireo Kaomina manodidina eny. Raha toa mantsy ka nangataka tamin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny ben’ny tanànan’Ivato, Penjy Randrianarisoa, amin’ny tokony hijerena manokana beantitra amin’ny fandraisana …Tohiny
ankara en iyi düğün fotoğrafçısı dans Sortie de Air Madagascar de l’annexe B
Tsy mba toy ireo filoha teo aloha miavonavona sy mahasahy manilikilika an-kolaka na mivantana ny mpiray tanindrazana aminy ny Filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina. Asehony hatrany ny maha olon’ny fihavanana azy. Na io amin’ny asa na ...Tohiny
Fotoam-bita : Vahaolana maharitra ny hanomezana ny fahefana eny ifotony hiaro ny tany
Mohamed VI:MAHAY MANDRAY VAHINY NY MALAGASY